(6) - BookCubicle
Anna : 5/5 Coffee Chapter. Thanks for the Coffee Jkiley ^^ Enjoy the chap nya
အပိုငျး - ၆ : ယှနျးခြီနဲ့ယှနျးက တဈယောကျတညျး။
မှနျတသသကွညျ့နတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို သူ့ဦးလေးက မကွညျသလိုကွညျ့တယျ။ အိမျရှခေ့နျးက သူတို့အိမျကိုအညံ့အတိုကျအခိုကျတှလောရငျ တနျပွနျပါစဆေိုတဲ့အယူအဆနဲ့ ထောငျထားတဲ့ ကွညျ့မှနျခပျြနဲ့လှံရှမှေ့ာ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျကတော့ သူ့ကိုယျသူ သလို့မဆုံးသေးဘူးပေါ့။
“မငျးက ဘယျသှားမှာမို့လို့ ဒီလောကျသနတောလဲ…”
ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ ရညျးစားရနလေညျး မဆူဘူးဆိုပမေဲ့ အခုလိုကွီးရှမှေ့ာ လုပျနတောက မကျြစိဆံပငျမှေးစူးခငျြစရာပါပဲ။ မကျြမှနျမညျးလေးထောငျ့နဲ့သတငျးစာကိုငျပွီး သူ့ကိုလှမျးငေါ့တဲ့ ဦးလေးဖွဈသူကို ခနျ့ဝသေျော ကွညျ့တယျ။ သှားလေးဖွဲပွီး…
“ကြှနျတျော Assignment သှားလုပျမလို့…”
ဦးလေးရဲ့မကျြခုံးတှကေ တဈဖကျနဲ့တဈဖကျထိလုနီးပါးဖွဈအောငျ တှနျ့ခြိုးသှားတော့တယျ။ ကြားသားမိုးကွိုး သူ့တူက ကြောငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့အရေးကိစ်စတှကေို စိတျဝငျတစားရှိသေးတယျပေါ့။ တဈခြိနျလုံး ဒီတူတဈကောငျက လုပျခငျြရာလုပျနတေယျလို့ သူ ထငျနတော။
“Assignment လုပျတာက အဲ့လောကျပွငျစရာလိုလို့လား…”
“သူ့အိမျမှာသှားလုပျမှာဆိုတော့ သူ့မိဘတှလေညျးရှိနရေငျ အမွငျကောငျးဖို့လိုတယျလေ…”
ခနျ့ဝသေျောကတော့ ရိုးရိုးလေးပွောလိုကျတာပဲ။ လူကွီးတဈယောကျကတော့ အတှေးတှမြေားသှားတော့တယျ။
သူ့ဦးလေးက မေးမွနျးတော့မဲ့အခြိနျမှာ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ လှဈခနဲထှကျသှားတော့တယျ။ လှတျလပျတဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျအသှငျနဲ့ပေါ့။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာယှနျးခြီကလညျး အိမျကိုတဈယောကျတညျး သနျ့ရှငျးရေးအသလေုပျနတေော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျော သူ့အိမျကို လာလညျမဲ့အခြိနျ မဟုတျသေးပါဘူး ခနျ့ဝသေျော သူ့အိမျကို Assignment လာလုပျတဲ့အခြိနျမှာ သူ့အိမျကွီးက ညဈပတျနလေို့ မဖွဈဘူး။ သူ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျကတငျ သနျ့ရှငျးရေးလုပျခဲ့ပမေဲ့ အခုထပျလုပျဖို့လညျး လိုနသေေးတယျ။ ဒီတဈပတျပိတျရကျမှာ သူ့ အဖနေဲ့အမကေ အိုဗာတိုငျရှိနခေဲ့တယျ။ အစိုးရအလုပျတှကေ ဘာလို့ဒီလောကျတောငျ အလုပျမြားနရေတာလဲ။ သူ့မိဘတှကေ ဘဏ်ဍာရေးပိုငျးကလူတှဖွေဈနလေို့မြားလား။ စိတျဆငျးရဲလိုကျတာ။
အိမျထဲမှာ သူ ပြာယာခတျသနျ့ရှငျးရေးလုပျ၊ အငှအေ့သကျကို ကောငျးအောငျလုပျနတောကို သူ့ခှေးလေးက အနောကျက တဈကောကျကောကျလိုကျဆော့နရေငျးနဲ့ ယှနျးခြီမှာ ခြှေးပြံနခေဲ့တယျ။
တဈအိမျလုံးကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပွီးခြိနျမှာ ယှနျးခြီအခနျးထဲကို ဝငျလိုကျတယျ။ သူ့အခနျးမှာပဲ Assignment လုပျကွရမယျမဟုတျလား။ သူ့အိပျယာလေးကို သူ ကွညျ့တယျ။ အဝတျတှကေို သူ သခြောကွညျ့တယျ။ အကုနျလုံးကို စိတျတိုငျးကသြှားပွီးတော့မှ ယှနျးခြီ နဖူးထကျမှာ စို့ခငျြခငျြဖွဈနတေဲ့ ခြှေးလေးကို သုတျနိုငျတော့တယျ။ ရပွီ ဒီလောကျဆို သူ့အခနျးက… အိပျယာကို သူဘာလုပျရဦးမလဲ။ ယှနျးခြီ ခေါငျးလေးစောငျးပွီး စဉျးစားနရေငျးကနေ မကျြနှာလေးရဲသှားတော့တယျ။ အိပျယာက ဘာလုပျရမှာလဲ! သူတို့က Assignment လုပျမှာ အိပျယာက ဘာဆိုငျလို့လဲ!
မကျြနှာရဲရဲလေးနဲ့ သူ့အခနျးထဲက ပွနျထှကျလာပွီး မီးဖိုခနျးထဲ သူဝငျသှားတော့တယျ။ သူနဲ့ခနျ့ဝသေျောစားဖို့ နလေ့ညျစာကိုလညျး သူခကျြပွီးပွီ၊ ညက ကှတျကီးတခြို့လညျးလုပျထားသေးတယျ၊ ခနျ့ဝသေျောလာရငျ ကှတျကီးနဲ့ ကျောဖီဖြျောလိုကျမယျ။ ဒါဆို သူတို့အဆငျပွသှေားပွီလေ။ စိတျထဲမှာ စီစဉျမှုတှလေုပျပွီးခြိနျမှာ ယှနျးခြီ ကိုယျ့ကိုယျကို အကနြေပျကွီးကနြေပျနရေငျး ခေါငျးလေးညိတျလိုကျတယျ။ ကွညျ့စမျး သူ့အစီအစဉျက ပွီးပွညျ့စုံလိုကျတာ!
အိမျရှကေ့ ခေါငျးလောငျးသံကွောငျ့ ယှနျးခြီကပြာကယာ အိမျရှခေ့နျးကို ပွေးထှကျလာလိုကျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက မွနျလိုကျတာ။
ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျလေးပိုကျပွီး သူ့အိမျရှရေ့ပျနတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးခြီပွုံးကွညျ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို ခေါငျးစခွဆေုံးကွညျ့ပွီး သူ့နားထငျကိုသူ လကျညှိုးလေးနဲ့ကုတျပွီး…
ယှနျးခြီကွောငျတကျတကျလေးပွနျပွောတယျ။ သူ မနကျပိုငျးအကုနျပွီးသှားတာကို ဘာခကျြဖို့လိုနလေို့လဲ။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို ကွညျ့ပွီး…
“မငျး Apron ဝတျထားလို့…”
ခနျ့ဝသေျောရဲ့နားရှကျဖြားလေးတှကေ နီနခေဲ့တယျ။ ယှနျးခြီက ဘာလို့ Apron နဲ့တအားကို ကွညျ့လို့ကောငျးနတောလဲ။ သူက အိမျရှငျမလေးတဈယောကျလိုပဲ။ အိမျရှငျမလေးတဈယောကျက သူ့ယောကျြားပွနျလာတာကို လာကွိုနသေလို သူခံစားရတယျ။ အတှေးကွောငျ့ သူ့နားရှကျဖြားတှကေ ပိုရဲလာတော့တယျ။ ဒုက်ခပါပဲ သူ ဘာတှတှေေးနမေိတာလဲ။ ယှနျးခြီကတော့ သူ့အတှေးတှကေိုသိရငျ သူတော့ ကောငျးကောငျးအရှကျကှဲမှာပဲ။ ယှနျးခြီရဲ့မကျြနှာတဈခုလုံးကလညျး ထူးမခွားနားပါပဲ။ သူတဈမနကျလုံး Apron တောငျမခြှတျနိုငျဘဲ ပွေးလှားနခေဲ့တာပဲ။ အာ… ခနျ့ဝသေျောကတော့ သူ့ကိုရယျနတေော့မှာပဲ။
ဒီလိုနဲ့ကောငျကလေးနှဈယောကျက တခဏလောကျ ကိုယျစီအတှေးနဲ့ရှကျနကွေပွနျပါတယျ။
နောကျဆုံးမှာတော့ အိမျရှငျဖွဈတဲ့ယှနျးခြီကပဲ မွနျမွနျစကားထပျစတော့တယျ။ မဟုတျရငျ သူတို့အိမျရှမှေ့ာ အတျောကွာနလေိမျ့မယျ။
ခနျ့ဝသေျောကို သူ့အခနျးဆီကို ယှနျးခြီရှကေ့ ချေါသှားတယျ။ ဘာလို့မှနျးမသိ သူ့ရငျက တဒိတျဒိတျခုနျနခေဲ့တယျ။ ဘာကွောငျ့မှနျးလညျး သူ့ကိုယျသူ မသိဘူး။ တကယျဆို သူတို့က Assignment လုပျကွမလို့ပါ။ ဘာလို့သူက ရငျတဒိတျဒိတျခုနျနရေတာလဲ။ ယှနျးခြီတှေးနခေဲ့သလို ခနျ့ဝသေျောကလညျး တူညီသောအတှေးကိုတှေးနခေဲ့ပါတယျ။ ယှနျးခြီအိမျကို Assignment လာလုပျတာဆိုပမေဲ့ သူ့ရငျက တဒိတျဒိတျခုနျနခေဲ့တယျ။ ဘာကွောငျ့မှနျးလညျး သူ့ကိုယျသူ နားမလညျဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး ရငျခုနျမှုနဲ့အတူ သူ့စိတျက ကွညျလညျးကွညျနူးနသေေးတယျ။
ယှနျးခြီတဲ့အခနျးက သူ တှေးကွညျ့ဖူးသလို သပျသပျရပျရပျလေးပါပဲ။ ယှနျးခြီပီသတဲ့ ခယျြရီအငှအေ့သကျတှရှေိတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့အခနျးက သူ့အခနျးထကျ နညျးနညျးလေးတော့ ကဉျြးတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈယောကျတညျးနတောနဲ့ဆိုရငျတော့ ကယျြတယျလို့တော့ ပွောရမှာပါပဲ။
“စာဖတျခနျးကနေ ငါ ကုလားထိုငျတဈလုံးသှားယူလိုကျဦးမယျ…”
ဆိုငျကယျဦးထုပျကို ယှနျးခြီရဲ့အိပျယာပျေါမှာ တငျလိုကျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျောပွောတယျ။ ခုံတဈလုံးက ဘယျလောကျမှ မလေးပမေဲ့လညျး ယှနျးခြီကိုဆိုရငျ သူကိုက အလိုလိုကို ဂရုစိုကျခငျြနတော။
ယှနျးခြီကလညျး သူ့ရဲ့ ဂရုစိုကျမှုတှကေို မငွငျးဘူးဆိုတော့ သူတို့နှဈယောကျက အဆငျပွနေတေယျလို့တော့ ပွောကွရမှာပေ့ါ။
ယှနျးခြီတို့အိမျရဲ့စာကွညျ့ခနျးက တကယျတော့ အဖနေဲ့အမရေဲ့အလုပျခနျးလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘဏ်ဍာရေးဝနျထမျးတှမေို့ သူ့အဖနေဲ့အမရေဲ့ စာရငျးဇယားတှကေ အဲ့ဒီအခနျးမှာပဲ ထားထားတယျ။ ယှနျးခြီနဲ့ခနျ့ဝသေျောက သူတို့နဲ့မဆိုငျတာကို မကျြလုံးနဲ့တောငျမကွညျ့ဘဲ ခုံကိုယူပွီး ပွနျထှကျလာကွတယျ။ နောကျတော့ ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောကို သူ့အခနျးမှာ ခဏထိုငျစောငျ့ခိုငျးပွီးတော့ မီးဖိုခနျးကို ကျောဖီဖြျောဖို့အတှကျ ပွနျထှကျသှားတော့တာပေါ့။ ယှနျးခြီ ကျောဖီဖြျောနရေရငျ ပငျပနျးနမှောကွောငျ့ မလုပျနဲ့လို့ပွောခငျြပမေဲ့လညျး ယှနျးခြီကိုယျတိုငျဖြျောပေးတဲ့ ကျောဖီကိုသောကျခငျြတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျော ငွိမျငွိမျလေးနလေိုကျတယျ။ နောကျပွီး ယှနျးခြီမရှိနရေငျ သူ ယှနျးခြီရဲ့အခနျးကို ပျေါပျေါထငျထငျ စူးစမျးလို့ရတယျလေ။
ယှနျးခြီကျောဖီဖြျောဖို့ ထှကျသှားတာနဲ့ ခနျ့ဝသေျောက ခုံမှာထိုငျရငျးနဲ့ ယှနျးခြီရဲ့အခနျးကို စူးစမျးတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့အခနျးက သပျသပျရပျရပျလေးဖွဈနပွေီးတော့ အကုနျလုံးက သူ့နရောနဲ့သူ အံဝငျခှငျကြ စီရီထားတယျ။ အရုပျတှေ၊ Figure တှေ၊ နောကျခံနံရံအရောငျလှလှလေးတှေ။ ယောကျြားလေးသိပျမဆနျပမေဲ့လညျး မိနျးကလေးဆနျတယျလို့လညျး ပွောလို့မရပွနျဘူး။ နောကျတော့ သူ့မကျြလုံးတှကေ ယှနျးခြီရဲ့အိပျယာကိုရောကျသှားတယျ။ ယှနျးခြီအိပျစကျတဲ့ခုတငျမှာ ယှနျးခြီရဲ့ အငှအေ့သကျတှကေ အမြားဆုံးဖွဈလိမျ့မယျ။ ခနျ့ဝသေျော သူ့အတှေးတှကေို ထပျမောငျးထုတျပွနျတယျ။ မဟုတျသေးဘူး။ သူ ဒီလိုတှမေတှေးသငျ့ဘူး။ သူက Assignment လုပျနတောလေ။
အခနျးကိုကွညျ့နရေငျးနဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မကျြလုံးတှကေ မှေးစငျးသှားတယျ။ ခန်ဓာတဈခုလုံးမှာ ရှိတဲ့သှေးတှကေ သူ့ခေါငျးပျေါဆောငျ့တကျသှားသလိုပဲ။ သူက ယှနျးရဲ့အမာခံပရိသတျဖွဈတာကွောငျ့မို့ ယှနျးရဲ့ပုံတှကေို အကုနျအစငျသိမျးတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယှနျးပုံတှရေဲ့ နောကျခံရှုခငျးတှကေို သူ ကောငျးကောငျးသိတာပေါ့။ ယှနျးခြီ ပွနျမရောကျသေးတာကွောငျ့ သူ့ဖုနျးကိုဖှငျ့ပွီး ယှနျးရဲ့ပုံတှကေို ကွညျ့လိုကျတယျ။ selfie ပုံတခြို့နောကျခံက ထပျတူကနြရေောပဲ။ လြှို့ဝှကျခကျြကွီးတဈခုကို သိလိုကျရတဲ့ကောငျကလေးတဈယောကျရဲ့ ရငျတှကေ တဒိနျးဒိနျးခုနျနခေဲ့တယျ။
ဗနျးလေးတဈခုမှာ ကျောဖီနှဈခှကျနဲ့အတူ ကှတျကီးထညျ့ထားတဲ့ပနျးကနျလေးနဲ့အတူ ယှနျးခြီရောကျလာတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရငျကတော့ တဒိတျဒိတျခုနျနဆေဲပဲ။ သူ့စိတျထဲရှိနတေဲ့ ကောငျကလေးနဲ့ မရရငျသပေါတော့မယျလို့ ခံစားနရေတဲ့ ကောငျမလေးက တဈယောကျတညျးတဲ့။
စိတျနဲ့ကိုယျနဲ့မကပျသလိုလိုဖွဈနတေဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးခြီမေးတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ ခေါငျးပဲယမျးပွလိုကျတော့တယျ။ ကျောဖီသောကျမုနျ့စားပွီး ဟိုဟိုဒီဒီ သူတို့စကားပွောပွီးတော့ Assignment နဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးကို စပွောကွတယျ။ ယှနျးခြီပွောတာကို သခြောနားထောငျရငျး ခနျ့ဝသေျော ရငျထဲမှ ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိ ဖွဈနခေဲ့တယျ။
သူ ဘာလုပျရမလဲ။ သူ crush နတေဲ့မိနျးကလေးက တကယျတော့ မိနျးကလေး မဟုတျဘူး။ ယောကျြားလေးတဈယောကျ။ ဒီခတျေကွီးထဲမှာ မိနျးကလေးလိုဝတျဆငျတဲ့ ယောကျြားလေးလှလှလေးတှကေ သိပျကိုပေါမြားပါတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ မိနျးကလေးအစဈတှထေကျတောငျ ခဈြဖို့ကောငျးနသေေးတယျ။ ဥပမာ ယှနျးခြီလိုပေါ့။ ယှနျးခြီကတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အတှေးတှကေို မသိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့လုပျဖို့အတှကျသငျ့တျောမဲ့ ခေါငျးစဉျကို သူ စဉျးစားနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ သူ့ကို ဆာလောငျနတေဲ့ သားရဲတဈကောငျရဲ့အကွညျ့ကို မရညျရှယျပါဘဲနဲ့ ရှောငျရှားမိသလို ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
သူတို့တျောတျောကွာကွာစဉျးစားပွီး နောကျဆုံးတော့ Assignment ခေါငျးစဉျက Confirm ဖွဈသှားခဲ့တယျ။ နလေ့ညျထမငျးစားခြိနျလညျး ရောကျနရေောပေါ့။
“ငါတို့ နလေ့ညျစာ အရငျစားကွရအောငျ…”
ယှနျးခြီရဲ့ မကျြလုံးတှကေို ခနျ့ဝသေျောရငျမဆိုငျရဲဘူး။ သူ တကယျကွီးကို ရငျခုနျနတေယျ။ သူတို့ စကားပွောတိုငျး သူ ရငျခုနျနတေယျ။ ထိနျးခြုပျလို့ကိုမရဘူး။
“သူတို့က အိုတီနဲ့… တဈခြိနျလုံး ငါ့မိဘတှကေ အိုဗာတိုငျဆငျးရတယျ…”
“အိမျမှာ မငျးတဈယောကျတညျးပဲ အမွဲရှိနရေတာလား…”
စပျစုနတေဲ့ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးခြီစိတျထဲမှ ဘယျလိုမှမထငျဘူး။ သူ ရိုးသားစှာပဲ ပွောပွခဲ့တယျ။
“အငျးပေါ့… တဈခါခါတော့ ငါ့ညီမဝမျးကှဲ ဟနျနာလာတတျတယျ…”
ဟနျနာနဲ့ပတျသကျတဲ့ကိစ်စကိုတော့ ယှနျးခြီဒီလောကျပဲ ပွောလိုကျတယျ။ ဘာကွောငျ့ဆို ဟနျနာက ယှနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကောငျမလေးလေ။
“ငါ ဒီနမေ့ငျးလာမယျဆိုလို့ ပှနျးခြိကိုတောငျ အခနျးထဲမှာထားထားတာ… ခဏနျော ငါ ပှနျးခြိကို အစာသှားကြှေးလိုကျဦးမယျ…”
“ငါက မငျးကို တိရိစ်ဆာနျတှကေို မခဈြတတျဘူးထငျထားတာ…”
ယှနျးခြီက ခပျတိုးတိုးလေးပွောတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက လူကောငျးလေးဆိုပမေဲ့ အမွဲရနျဖွဈနတေဲ့ သူဆိုတော့ တိရိစ်ဆာနျလေးတှနေဲ့ တဈခါမှ ယှနျးခြီတှဲမမွငျဖူးဘူးရယျ။
“ငါ တိရိစ်ဆာနျလေးတှလေညျး ခဈြတတျပါတယျ…”
ဥပမာ မငျးလိုလေးလလေို့တော့ ခနျ့ဝသေျောမပွောဖွဈခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ ပှနျးခြိကို အစာအတူတူကြှေးကွတယျ။ ပှနျးခြိက တကယျတော့ ယှနျးပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျောခှေးလေးပါ။ သူက ယှနျးနဲ့အတူ ပုံအတျောမြားမြားမှာ တှဲပါဖူးတယျလေ။ ယှနျးခြီကတော့ ဒီကိစ်စကိုမလေို့နတေယျ။ တဈအိမျတညျး သူတို့နှဈယောကျလုံးဆိုတဲ့အသိရယျ။ သူ့ရဲ့အိမျကို တဈခါမှ အတနျးဖျောတဈယောကျ လာမလညျဖူးတာရယျကွောငျ့ သူ့စိတျတှကေ အရမျးကို လှုပျရှားနခေဲ့တယျ။
ပှနျးခြိကိုမွငျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ခနျ့ဝသေျောစိတျထဲ သခြောသှားတော့တယျ။ ယှနျးခြီက တဈဦးတညျးသောသား ဖွဈတယျ။ အရငျယှနျးခြီနဲ့ပတျသကျပွီးဘာတဈခုမှ သခြောမသိခငျကတော့ ယှနျးနဲ့ယှနျးခြီက မောငျနှမဘာညာ ဖွဈနိုငျသေးတယျလို့ သူ ထငျလိုကျသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယှနျးခြီက တဈဦးတညျးသောသားဆိုတာကို သူတို့အတူတှဲသှားတှဲလာ လုပျရငျးကနေ ခနျ့ဝသေျော သိခဲ့ရတယျ။ ဒီတော့ ယှနျးနဲ့ယှနျးခြီက တဈယောကျတညျးဆိုတာကို သူ ကြိနျးသပွေောနိုငျတာပေါ့။
ပှနျးခြိကို အစာကြှေးပွီးနောကျတော့ သူတို့နလေ့ညျစာစားတယျ။ နောကျတော့ Assignment နဲ့ပတျသကျပွီး ပါမဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှေ ဆကျပွောဖွဈကွတယျ။ ညနသေိပျမစောငျးခငျ ယှနျးခြီက သူ့ကို အိမျပွနျခိုငျးခဲ့တယျ။ ဆောငျးတှငျးဆို မှောငျရိပျလာတာ စောတယျတဲ့လေ။ ယှနျးခြီကတော့ တဈခြိနျလုံး စိတျနဲ့လူနဲ့ မကပျဖွဈနတေဲ့ သူ့အကွောငျးကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ပုံမှနျ အတိုငျးလေးပဲ ဆကျဆံနခေဲ့တယျ။
အိမျပွနျရောကျ၊ ညစာစား ရမေိုးခြိုးပွီးနောကျမှာတော့ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ ခုတငျပျေါမှာ ဟိုလူးဒီလိမျ့နဲ့ပေါ့။ သူ ဘယျလိုလုပျရမလဲ။ သူ့ဦးနှောကျကွီးက ပေါကျထှကျတော့မလိုပဲ။ သူ့ရဲ့အလှနတျဘုရားမလေးက ယောကျြားလေးတဈယောကျ ဖွဈတယျ။ အဲ့ဒါကို သူ ဒေါသမထှကျဘူး။ အဲ့ဒီအစား ယှနျးခြီနဲ့ယှနျးက တဈယောကျတညျး ဖွဈနတေဲ့အတှကျ သူ့စိတျထဲမှာတောငျ သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈနလေိုကျသေးတယျ။ ဒါက ဘယျလိုမြိုးကွီးလဲ။ သူက ယှနျးကိုစိတျဝငျစားတာလား၊ ယှနျးခြီကို စိတျဝငျစားတာလားတောငျ သူ့ကိုယျသူ မသိတော့ဘူး။ ဒါပမေဲ့ သခြောတဈခုက ယှနျးခြီက ယှနျးမဟုတျနလေညျး သူ စိတျဝငျစားနတေယျ။ ယှနျးက သူ့ရဲ့နတျဘုရားမလေးလို့ သူ့စိတျထဲ သတျမှတျထားရငျ ယှနျးခြီကတော့ သူ လကျလှမျးမှီတဲ့ ခဈြသူကောငျလေးပေါ့။
ခဈြသူကောငျလေး… ခနျ့ဝသေျော မကျြနှာတဈခုလုံးရဲတကျသှားတော့တယျ။ သူ တဈစုံတဈယောကျကို ဒိတျလုပျဖို့ တဈခါလေးတောငျ မတှေးဖူးခဲ့ဘူး။ တဈခြိနျလုံး ယှနျးကပဲသူ့စိတျထဲမှာ ရှိနတောကွောငျ့ Idol ရှိရငျ ကမ်ဘာတဈခုလုံး ပွညျ့စုံပွီလို့ သူ ထငျထားတယျလေ။ ယှနျးခြီကို သူ ဒိတျရမယျ? အဲ့ဒါဆို ဘယျကစပွောရမှာလဲ။ ကြိနျးသပေေါကျ ဒိတျရအောငျလို့ဖှငျ့ပွောရမှာပေါ့!
ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမာသှားတဲ့ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ဖုနျးကို ဖှငျ့လိုကျပါတယျ။ Viber မှာတော့ ယှနျးခြီက နာနတျသီးဆံပငျပုံစညျးထားတဲ့ သူ့နဖူးအပျေါပိုငျးလေးကို Profile အဖွဈထားထားလရေဲ့။ ဘယျလောကျမြား ဒီနဖူးပွောငျရှငျးလေးက နမျးခငျြစရာကောငျးလိုကျပါသလဲ။
ခနျ့ဝသေျော : “ဟေ့!”
ယှနျးခြီ : “?????”
ခနျ့ဝသေျော : “ဒါက မငျးမဟုတျလား?”
ပုံတဈပုံကိုပို့ပွီး သူ တဈဆကျတညျးမေးခှနျးထုတျတယျ။ ယှနျးခြီက ခကျြခငျြး seen ပွခဲ့ပမေဲ့ Reply ကတော့ တျောတျောနဲ့ပွနျမလာခဲ့ပါဘူး။ တျောတျောကွီးကွာမှ…
ယှနျးခြီ : “ဘာ… ဘာဖွဈလို့လဲ?”
ခနျ့ဝသေျော : “ငါ ပုံရဲ့နောကျခံကို မှတျမိလိုကျတာ… အဲ့ဒါက မငျးအခနျးပုံနဲ့တူနလေားလို့…”
ယှနျးခြီ : “…………”
ခနျ့ဝသေျော : “ဒါ မငျးမဟုတျလား?”
ယှနျးခြီကို အတငျးဝနျခံခိုငျးသလို ဖွဈနတောနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျော စိတျမကောငျးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူ ဘယျလိုလုပျရမလဲ။ ဒီလိုမမေးရငျယှနျးခြီက သူ့ကို ဝနျခံမှာမဟုတျဘူးလေ။
ယှနျးခြီ : “…… ဟုတျ… ဟုတျတယျ…”
ခနျ့ဝသေျော: “… ငါပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောမယျ…”
သူ စာရိုကျနတေုနျးမှာပဲ ယှနျးခြီရဲ့typing message လေးကထကျတကျလာခဲ့တယျ။
ယှနျးခြီ : “ငါ… ငါပါပဲ…”
ခနျ့ဝသေျော : “မငျးငါနဲ့တှဲရငျငါဒီကိစ်စကို တိတျတိတျလေးနပေေးမယျ…”
ယှနျးခြီ : “!!!!!!”
စာတဈကွောငျးရိုကျလိုကျတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ဘာလို့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွောလိုကျရသလို သူ့ မကျြနှာတဈခုလုံး နီရဲသှားမှနျး ခနျ့ဝသေျောမသိဘူး။ သူ့ရငျကလညျး တဒိတျဒိတျခုနျနခေဲ့တယျ။ သူ ဘယျလိုလုပျရမလဲ။ ယှနျးခြီက သူ့ကိုငွငျးတော့ မငွငျးလောကျပါဘူးနျော။ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ ရငျတဖိုဖိုနဲ့ ဖွဈနခေဲ့တယျ။ ယှနျးခြီဘကျကတော့ ခကျြခငျြးကို offline ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ တဈညလုံး ရငျတထိတျထိတျနဲ့ပေါ့။ သူတို့နောကျတဈနေ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရငျ ဘယျလိုမြား ဖွဈကွလမေလဲ။
အပိုင်း - ၆ : ယွန်းချီနဲ့ယွန်းက တစ်ယောက်တည်း။
မှန်တသသကြည့်နေတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို သူ့ဦးလေးက မကြည်သလိုကြည့်တယ်။ အိမ်ရှေ့ခန်းက သူတို့အိမ်ကိုအညံ့အတိုက်အခိုက်တွေလာရင် တန်ပြန်ပါစေဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ ထောင်ထားတဲ့ ကြည့်မှန်ချပ်နဲ့လှံရှေ့မှာ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ကိုယ်သူ သလို့မဆုံးသေးဘူးပေါ့။
“မင်းက ဘယ်သွားမှာမို့လို့ ဒီလောက်သနေတာလဲ…”
ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် ရည်းစားရနေလည်း မဆူဘူးဆိုပေမဲ့ အခုလိုကြီးရှေ့မှာ လုပ်နေတာက မျက်စိဆံပင်မွှေးစူးချင်စရာပါပဲ။ မျက်မှန်မည်းလေးထောင့်နဲ့သတင်းစာကိုင်ပြီး သူ့ကိုလှမ်းငေါ့တဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူကို ခန့်ဝေသော် ကြည့်တယ်။ သွားလေးဖြဲပြီး…
“ကျွန်တော် Assignment သွားလုပ်မလို့…”
ဦးလေးရဲ့မျက်ခုံးတွေက တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိလုနီးပါးဖြစ်အောင် တွန့်ချိုးသွားတော့တယ်။ ကျားသားမိုးကြိုး သူ့တူက ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်တစားရှိသေးတယ်ပေါ့။ တစ်ချိန်လုံး ဒီတူတစ်ကောင်က လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတယ်လို့ သူ ထင်နေတာ။
“Assignment လုပ်တာက အဲ့လောက်ပြင်စရာလိုလို့လား…”
“သူ့အိမ်မှာသွားလုပ်မှာဆိုတော့ သူ့မိဘတွေလည်းရှိနေရင် အမြင်ကောင်းဖို့လိုတယ်လေ…”
ခန့်ဝေသော်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာပဲ။ လူကြီးတစ်ယောက်ကတော့ အတွေးတွေများသွားတော့တယ်။
သူ့ဦးလေးက မေးမြန်းတော့မဲ့အချိန်မှာ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် လှစ်ခနဲထွက်သွားတော့တယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အသွင်နဲ့ပေါ့။
အဲ့ဒီအချိန်မှာယွန်းချီကလည်း အိမ်ကိုတစ်ယောက်တည်း သန့်ရှင်းရေးအသေလုပ်နေတော့တယ်။ ခန့်ဝေသော် သူ့အိမ်ကို လာလည်မဲ့အချိန် မဟုတ်သေးပါဘူး ခန့်ဝေသော် သူ့အိမ်ကို Assignment လာလုပ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အိမ်ကြီးက ညစ်ပတ်နေလို့ မဖြစ်ဘူး။ သူ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုထပ်လုပ်ဖို့လည်း လိုနေသေးတယ်။ ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ သူ့ အဖေနဲ့အမေက အိုဗာတိုင်ရှိနေခဲ့တယ်။ အစိုးရအလုပ်တွေက ဘာလို့ဒီလောက်တောင် အလုပ်များနေရတာလဲ။ သူ့မိဘတွေက ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းကလူတွေဖြစ်နေလို့များလား။ စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ။
အိမ်ထဲမှာ သူ ပျာယာခတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ အငွေ့အသက်ကို ကောင်းအောင်လုပ်နေတာကို သူ့ခွေးလေးက အနောက်က တစ်ကောက်ကောက်လိုက်ဆော့နေရင်းနဲ့ ယွန်းချီမှာ ချွေးပျံနေခဲ့တယ်။
တစ်အိမ်လုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးချိန်မှာ ယွန်းချီအခန်းထဲကို ဝင်လိုက်တယ်။ သူ့အခန်းမှာပဲ Assignment လုပ်ကြရမယ်မဟုတ်လား။ သူ့အိပ်ယာလေးကို သူ ကြည့်တယ်။ အဝတ်တွေကို သူ သေချာကြည့်တယ်။ အကုန်လုံးကို စိတ်တိုင်းကျသွားပြီးတော့မှ ယွန်းချီ နဖူးထက်မှာ စို့ချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့ ချွေးလေးကို သုတ်နိုင်တော့တယ်။ ရပြီ ဒီလောက်ဆို သူ့အခန်းက… အိပ်ယာကို သူဘာလုပ်ရဦးမလဲ။ ယွန်းချီ ခေါင်းလေးစောင်းပြီး စဉ်းစားနေရင်းကနေ မျက်နှာလေးရဲသွားတော့တယ်။ အိပ်ယာက ဘာလုပ်ရမှာလဲ! သူတို့က Assignment လုပ်မှာ အိပ်ယာက ဘာဆိုင်လို့လဲ!
မျက်နှာရဲရဲလေးနဲ့ သူ့အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာပြီး မီးဖိုခန်းထဲ သူဝင်သွားတော့တယ်။ သူနဲ့ခန့်ဝေသော်စားဖို့ နေ့လည်စာကိုလည်း သူချက်ပြီးပြီ၊ ညက ကွတ်ကီးတချို့လည်းလုပ်ထားသေးတယ်၊ ခန့်ဝေသော်လာရင် ကွတ်ကီးနဲ့ ကော်ဖီဖျော်လိုက်မယ်။ ဒါဆို သူတို့အဆင်ပြေသွားပြီလေ။ စိတ်ထဲမှာ စီစဉ်မှုတွေလုပ်ပြီးချိန်မှာ ယွန်းချီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေရင်း ခေါင်းလေးညိတ်လိုက်တယ်။ ကြည့်စမ်း သူ့အစီအစဉ်က ပြီးပြည့်စုံလိုက်တာ!
အိမ်ရှေ့က ခေါင်းလောင်းသံကြောင့် ယွန်းချီကပျာကယာ အိမ်ရှေ့ခန်းကို ပြေးထွက်လာလိုက်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က မြန်လိုက်တာ။
ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်လေးပိုက်ပြီး သူ့အိမ်ရှေ့ရပ်နေတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းချီပြုံးကြည့်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို ခေါင်းစခြေဆုံးကြည့်ပြီး သူ့နားထင်ကိုသူ လက်ညှိုးလေးနဲ့ကုတ်ပြီး…
ယွန်းချီကြောင်တက်တက်လေးပြန်ပြောတယ်။ သူ မနက်ပိုင်းအကုန်ပြီးသွားတာကို ဘာချက်ဖို့လိုနေလို့လဲ။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို ကြည့်ပြီး…
“မင်း Apron ဝတ်ထားလို့…”
ခန့်ဝေသော်ရဲ့နားရွက်ဖျားလေးတွေက နီနေခဲ့တယ်။ ယွန်းချီက ဘာလို့ Apron နဲ့တအားကို ကြည့်လို့ကောင်းနေတာလဲ။ သူက အိမ်ရှင်မလေးတစ်ယောက်လိုပဲ။ အိမ်ရှင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ယောကျာ်းပြန်လာတာကို လာကြိုနေသလို သူခံစားရတယ်။ အတွေးကြောင့် သူ့နားရွက်ဖျားတွေက ပိုရဲလာတော့တယ်။ ဒုက္ခပါပဲ သူ ဘာတွေတွေးနေမိတာလဲ။ ယွန်းချီကတော့ သူ့အတွေးတွေကိုသိရင် သူတော့ ကောင်းကောင်းအရှက်ကွဲမှာပဲ။ ယွန်းချီရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကလည်း ထူးမခြားနားပါပဲ။ သူတစ်မနက်လုံး Apron တောင်မချွတ်နိုင်ဘဲ ပြေးလွှားနေခဲ့တာပဲ။ အာ… ခန့်ဝေသော်ကတော့ သူ့ကိုရယ်နေတော့မှာပဲ။
ဒီလိုနဲ့ကောင်ကလေးနှစ်ယောက်က တခဏလောက် ကိုယ်စီအတွေးနဲ့ရှက်နေကြပြန်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယွန်းချီကပဲ မြန်မြန်စကားထပ်စတော့တယ်။ မဟုတ်ရင် သူတို့အိမ်ရှေ့မှာ အတော်ကြာနေလိမ့်မယ်။
ခန့်ဝေသော်ကို သူ့အခန်းဆီကို ယွန်းချီရှေ့က ခေါ်သွားတယ်။ ဘာလို့မှန်းမသိ သူ့ရင်က တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းလည်း သူ့ကိုယ်သူ မသိဘူး။ တကယ်ဆို သူတို့က Assignment လုပ်ကြမလို့ပါ။ ဘာလို့သူက ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေရတာလဲ။ ယွန်းချီတွေးနေခဲ့သလို ခန့်ဝေသော်ကလည်း တူညီသောအတွေးကိုတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းချီအိမ်ကို Assignment လာလုပ်တာဆိုပေမဲ့ သူ့ရင်က တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းလည်း သူ့ကိုယ်သူ နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ရင်ခုန်မှုနဲ့အတူ သူ့စိတ်က ကြည်လည်းကြည်နူးနေသေးတယ်။
ယွန်းချီတဲ့အခန်းက သူ တွေးကြည့်ဖူးသလို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးပါပဲ။ ယွန်းချီပီသတဲ့ ချယ်ရီအငွေ့အသက်တွေရှိတယ်။ ယွန်းချီရဲ့အခန်းက သူ့အခန်းထက် နည်းနည်းလေးတော့ ကျဉ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်းနေတာနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျယ်တယ်လို့တော့ ပြောရမှာပါပဲ။
“စာဖတ်ခန်းကနေ ငါ ကုလားထိုင်တစ်လုံးသွားယူလိုက်ဦးမယ်…”
ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကို ယွန်းချီရဲ့အိပ်ယာပေါ်မှာ တင်လိုက်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော်ပြောတယ်။ ခုံတစ်လုံးက ဘယ်လောက်မှ မလေးပေမဲ့လည်း ယွန်းချီကိုဆိုရင် သူကိုက အလိုလိုကို ဂရုစိုက်ချင်နေတာ။
ယွန်းချီကလည်း သူ့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို မငြင်းဘူးဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်က အဆင်ပြေနေတယ်လို့တော့ ပြောကြရမှာပေ့ါ။
ယွန်းချီတို့အိမ်ရဲ့စာကြည့်ခန်းက တကယ်တော့ အဖေနဲ့အမေရဲ့အလုပ်ခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းတွေမို့ သူ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ စာရင်းဇယားတွေက အဲ့ဒီအခန်းမှာပဲ ထားထားတယ်။ ယွန်းချီနဲ့ခန့်ဝေသော်က သူတို့နဲ့မဆိုင်တာကို မျက်လုံးနဲ့တောင်မကြည့်ဘဲ ခုံကိုယူပြီး ပြန်ထွက်လာကြတယ်။ နောက်တော့ ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ကို သူ့အခန်းမှာ ခဏထိုင်စောင့်ခိုင်းပြီးတော့ မီးဖိုခန်းကို ကော်ဖီဖျော်ဖို့အတွက် ပြန်ထွက်သွားတော့တာပေါ့။ ယွန်းချီ ကော်ဖီဖျော်နေရရင် ပင်ပန်းနေမှာကြောင့် မလုပ်နဲ့လို့ပြောချင်ပေမဲ့လည်း ယွန်းချီကိုယ်တိုင်ဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီကိုသောက်ချင်တာကြောင့် ခန့်ဝေသော် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ယွန်းချီမရှိနေရင် သူ ယွန်းချီရဲ့အခန်းကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် စူးစမ်းလို့ရတယ်လေ။
ယွန်းချီကော်ဖီဖျော်ဖို့ ထွက်သွားတာနဲ့ ခန့်ဝေသော်က ခုံမှာထိုင်ရင်းနဲ့ ယွန်းချီရဲ့အခန်းကို စူးစမ်းတယ်။ ယွန်းချီရဲ့အခန်းက သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်နေပြီးတော့ အကုန်လုံးက သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျ စီရီထားတယ်။ အရုပ်တွေ၊ Figure တွေ၊ နောက်ခံနံရံအရောင်လှလှလေးတွေ။ ယောကျာ်းလေးသိပ်မဆန်ပေမဲ့လည်း မိန်းကလေးဆန်တယ်လို့လည်း ပြောလို့မရပြန်ဘူး။ နောက်တော့ သူ့မျက်လုံးတွေက ယွန်းချီရဲ့အိပ်ယာကိုရောက်သွားတယ်။ ယွန်းချီအိပ်စက်တဲ့ခုတင်မှာ ယွန်းချီရဲ့ အငွေ့အသက်တွေက အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခန့်ဝေသော် သူ့အတွေးတွေကို ထပ်မောင်းထုတ်ပြန်တယ်။ မဟုတ်သေးဘူး။ သူ ဒီလိုတွေမတွေးသင့်ဘူး။ သူက Assignment လုပ်နေတာလေ။
အခန်းကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက မှေးစင်းသွားတယ်။ ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့သွေးတွေက သူ့ခေါင်းပေါ်ဆောင့်တက်သွားသလိုပဲ။ သူက ယွန်းရဲ့အမာခံပရိသတ်ဖြစ်တာကြောင့်မို့ ယွန်းရဲ့ပုံတွေကို အကုန်အစင်သိမ်းတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယွန်းပုံတွေရဲ့ နောက်ခံရှုခင်းတွေကို သူ ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ ယွန်းချီ ပြန်မရောက်သေးတာကြောင့် သူ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး ယွန်းရဲ့ပုံတွေကို ကြည့်လိုက်တယ်။ selfie ပုံတချို့နောက်ခံက ထပ်တူကျနေရောပဲ။ လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကို သိလိုက်ရတဲ့ကောင်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်တွေက တဒိန်းဒိန်းခုန်နေခဲ့တယ်။
ဗန်းလေးတစ်ခုမှာ ကော်ဖီနှစ်ခွက်နဲ့အတူ ကွတ်ကီးထည့်ထားတဲ့ပန်းကန်လေးနဲ့အတူ ယွန်းချီရောက်လာတယ်။ ခန့်ဝေသော်ရင်ကတော့ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေဆဲပဲ။ သူ့စိတ်ထဲရှိနေတဲ့ ကောင်ကလေးနဲ့ မရရင်သေပါတော့မယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့ ကောင်မလေးက တစ်ယောက်တည်းတဲ့။
စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်သလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းချီမေးတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ ခေါင်းပဲယမ်းပြလိုက်တော့တယ်။ ကော်ဖီသောက်မုန့်စားပြီး ဟိုဟိုဒီဒီ သူတို့စကားပြောပြီးတော့ Assignment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို စပြောကြတယ်။ ယွန်းချီပြောတာကို သေချာနားထောင်ရင်း ခန့်ဝေသော် ရင်ထဲမှ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
သူ ဘာလုပ်ရမလဲ။ သူ crush နေတဲ့မိန်းကလေးက တကယ်တော့ မိန်းကလေး မဟုတ်ဘူး။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းကလေးလိုဝတ်ဆင်တဲ့ ယောကျာ်းလေးလှလှလေးတွေက သိပ်ကိုပေါများပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် မိန်းကလေးအစစ်တွေထက်တောင် ချစ်ဖို့ကောင်းနေသေးတယ်။ ဥပမာ ယွန်းချီလိုပေါ့။ ယွန်းချီကတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အတွေးတွေကို မသိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့လုပ်ဖို့အတွက်သင့်တော်မဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို သူ စဉ်းစားနေတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ သူ့ကို ဆာလောင်နေတဲ့ သားရဲတစ်ကောင်ရဲ့အကြည့်ကို မရည်ရွယ်ပါဘဲနဲ့ ရှောင်ရှားမိသလို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့တော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားပြီး နောက်ဆုံးတော့ Assignment ခေါင်းစဉ်က Confirm ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ နေ့လည်ထမင်းစားချိန်လည်း ရောက်နေရောပေါ့။
“ငါတို့ နေ့လည်စာ အရင်စားကြရအောင်…”
ယွန်းချီရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ခန့်ဝေသော်ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။ သူ တကယ်ကြီးကို ရင်ခုန်နေတယ်။ သူတို့ စကားပြောတိုင်း သူ ရင်ခုန်နေတယ်။ ထိန်းချုပ်လို့ကိုမရဘူး။
“သူတို့က အိုတီနဲ့… တစ်ချိန်လုံး ငါ့မိဘတွေက အိုဗာတိုင်ဆင်းရတယ်…”
“အိမ်မှာ မင်းတစ်ယောက်တည်းပဲ အမြဲရှိနေရတာလား…”
စပ်စုနေတဲ့ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းချီစိတ်ထဲမှ ဘယ်လိုမှမထင်ဘူး။ သူ ရိုးသားစွာပဲ ပြောပြခဲ့တယ်။
“အင်းပေါ့… တစ်ခါခါတော့ ငါ့ညီမဝမ်းကွဲ ဟန်နာလာတတ်တယ်…”
ဟန်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ ယွန်းချီဒီလောက်ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ဟန်နာက ယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောင်မလေးလေ။
“ငါ ဒီနေ့မင်းလာမယ်ဆိုလို့ ပွန်းချိကိုတောင် အခန်းထဲမှာထားထားတာ… ခဏနော် ငါ ပွန်းချိကို အစာသွားကျွေးလိုက်ဦးမယ်…”
“ငါက မင်းကို တိရိစ္ဆာန်တွေကို မချစ်တတ်ဘူးထင်ထားတာ…”
ယွန်းချီက ခပ်တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ ခန့်ဝေသော်က လူကောင်းလေးဆိုပေမဲ့ အမြဲရန်ဖြစ်နေတဲ့ သူဆိုတော့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ တစ်ခါမှ ယွန်းချီတွဲမမြင်ဖူးဘူးရယ်။
“ငါ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေလည်း ချစ်တတ်ပါတယ်…”
ဥပမာ မင်းလိုလေးလေလို့တော့ ခန့်ဝေသော်မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ ပွန်းချိကို အစာအတူတူကျွေးကြတယ်။ ပွန်းချိက တကယ်တော့ ယွန်းပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးပါ။ သူက ယွန်းနဲ့အတူ ပုံအတော်များများမှာ တွဲပါဖူးတယ်လေ။ ယွန်းချီကတော့ ဒီကိစ္စကိုမေ့လို့နေတယ်။ တစ်အိမ်တည်း သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဆိုတဲ့အသိရယ်။ သူ့ရဲ့အိမ်ကို တစ်ခါမှ အတန်းဖော်တစ်ယောက် လာမလည်ဖူးတာရယ်ကြောင့် သူ့စိတ်တွေက အရမ်းကို လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။
ပွန်းချိကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ခန့်ဝေသော်စိတ်ထဲ သေချာသွားတော့တယ်။ ယွန်းချီက တစ်ဦးတည်းသောသား ဖြစ်တယ်။ အရင်ယွန်းချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှ သေချာမသိခင်ကတော့ ယွန်းနဲ့ယွန်းချီက မောင်နှမဘာညာ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ သူ ထင်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယွန်းချီက တစ်ဦးတည်းသောသားဆိုတာကို သူတို့အတူတွဲသွားတွဲလာ လုပ်ရင်းကနေ ခန့်ဝေသော် သိခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့ ယွန်းနဲ့ယွန်းချီက တစ်ယောက်တည်းဆိုတာကို သူ ကျိန်းသေပြောနိုင်တာပေါ့။
ပွန်းချိကို အစာကျွေးပြီးနောက်တော့ သူတို့နေ့လည်စာစားတယ်။ နောက်တော့ Assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါမဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ဆက်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ညနေသိပ်မစောင်းခင် ယွန်းချီက သူ့ကို အိမ်ပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ဆောင်းတွင်းဆို မှောင်ရိပ်လာတာ စောတယ်တဲ့လေ။ ယွန်းချီကတော့ တစ်ချိန်လုံး စိတ်နဲ့လူနဲ့ မကပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အကြောင်းကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ပုံမှန် အတိုင်းလေးပဲ ဆက်ဆံနေခဲ့တယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်၊ ညစာစား ရေမိုးချိုးပြီးနောက်မှာတော့ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် ခုတင်ပေါ်မှာ ဟိုလူးဒီလိမ့်နဲ့ပေါ့။ သူ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သူ့ဦးနှောက်ကြီးက ပေါက်ထွက်တော့မလိုပဲ။ သူ့ရဲ့အလှနတ်ဘုရားမလေးက ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကို သူ ဒေါသမထွက်ဘူး။ အဲ့ဒီအစား ယွန်းချီနဲ့ယွန်းက တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူ့စိတ်ထဲမှာတောင် သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်နေလိုက်သေးတယ်။ ဒါက ဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲ။ သူက ယွန်းကိုစိတ်ဝင်စားတာလား၊ ယွန်းချီကို စိတ်ဝင်စားတာလားတောင် သူ့ကိုယ်သူ မသိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတစ်ခုက ယွန်းချီက ယွန်းမဟုတ်နေလည်း သူ စိတ်ဝင်စားနေတယ်။ ယွန်းက သူ့ရဲ့နတ်ဘုရားမလေးလို့ သူ့စိတ်ထဲ သတ်မှတ်ထားရင် ယွန်းချီကတော့ သူ လက်လှမ်းမှီတဲ့ ချစ်သူကောင်လေးပေါ့။
ချစ်သူကောင်လေး… ခန့်ဝေသော် မျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲတက်သွားတော့တယ်။ သူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဒိတ်လုပ်ဖို့ တစ်ခါလေးတောင် မတွေးဖူးခဲ့ဘူး။ တစ်ချိန်လုံး ယွန်းကပဲသူ့စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကြောင့် Idol ရှိရင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ပြည့်စုံပြီလို့ သူ ထင်ထားတယ်လေ။ ယွန်းချီကို သူ ဒိတ်ရမယ်? အဲ့ဒါဆို ဘယ်ကစပြောရမှာလဲ။ ကျိန်းသေပေါက် ဒိတ်ရအောင်လို့ဖွင့်ပြောရမှာပေါ့!
ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသွားတဲ့ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ဖုန်းကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ Viber မှာတော့ ယွန်းချီက နာနတ်သီးဆံပင်ပုံစည်းထားတဲ့ သူ့နဖူးအပေါ်ပိုင်းလေးကို Profile အဖြစ်ထားထားလေရဲ့။ ဘယ်လောက်များ ဒီနဖူးပြောင်ရှင်းလေးက နမ်းချင်စရာကောင်းလိုက်ပါသလဲ။
ခန့်ဝေသော် : “ဟေ့!”
ယွန်းချီ : “?????”
ခန့်ဝေသော် : “ဒါက မင်းမဟုတ်လား?”
ပုံတစ်ပုံကိုပို့ပြီး သူ တစ်ဆက်တည်းမေးခွန်းထုတ်တယ်။ ယွန်းချီက ချက်ချင်း seen ပြခဲ့ပေမဲ့ Reply ကတော့ တော်တော်နဲ့ပြန်မလာခဲ့ပါဘူး။ တော်တော်ကြီးကြာမှ…
ယွန်းချီ : “ဘာ… ဘာဖြစ်လို့လဲ?”
ခန့်ဝေသော် : “ငါ ပုံရဲ့နောက်ခံကို မှတ်မိလိုက်တာ… အဲ့ဒါက မင်းအခန်းပုံနဲ့တူနေလားလို့…”
ယွန်းချီ : “…………”
ခန့်ဝေသော် : “ဒါ မင်းမဟုတ်လား?”
ယွန်းချီကို အတင်းဝန်ခံခိုင်းသလို ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဒီလိုမမေးရင်ယွန်းချီက သူ့ကို ဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
ယွန်းချီ : “…… ဟုတ်… ဟုတ်တယ်…”
ခန့်ဝေသော်: “… ငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်…”
သူ စာရိုက်နေတုန်းမှာပဲ ယွန်းချီရဲ့typing message လေးကထက်တက်လာခဲ့တယ်။
ယွန်းချီ : “ငါ… ငါပါပဲ…”
ခန့်ဝေသော် : “မင်းငါနဲ့တွဲရင်ငါဒီကိစ္စကို တိတ်တိတ်လေးနေပေးမယ်…”
ယွန်းချီ : “!!!!!!”
စာတစ်ကြောင်းရိုက်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ဘာလို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောလိုက်ရသလို သူ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲသွားမှန်း ခန့်ဝေသော်မသိဘူး။ သူ့ရင်ကလည်း တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေခဲ့တယ်။ သူ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ယွန်းချီက သူ့ကိုငြင်းတော့ မငြင်းလောက်ပါဘူးနော်။ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ယွန်းချီဘက်ကတော့ ချက်ချင်းကို offline ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ တစ်ညလုံး ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့။ သူတို့နောက်တစ်နေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင် ဘယ်လိုများ ဖြစ်ကြလေမလဲ။
JulyMozart 09.12.2019, 13:29 5
MaskMelon 02.12.2019, 13:59 5
MoiraMo 30.11.2019, 08:42 4.9
RaiseRen 29.11.2019, 10:03 5
MeMo227 29.11.2019, 07:13 5